Okraina: Tantara Iray Mampalahelo Avy Amin’ny Fiainan’ireo Marary Manaraka Fitsaboana Fampienàna Fanaintainana · Global Voices teny Malagasy
Okraina: Tantara Iray Mampalahelo Avy Amin'ny Fiainan'ireo Marary Manaraka Fitsaboana Fampienàna Fanaintainana
Voadika ny 15 Jona 2018 16:00 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Febroary 2012)
Vao haingana, blaogera Okraniana roa no nifantoka tamin'ireo olan‘ny fampihenana vokadratsy. Ireo mpampiasa ny Livejournal, depo3p sy zpt_users, dia namerina nandefa tantara iray mikasika marary momba ny opiate replacement therapy (ORT) (fitsaboana fanolo ho an'ny rongony mahery) avy ao an-tanànan'i Shostka. Hita ho tena niaritra ny aretina ilay marary, ary na eo aza ny zavamisy hoe ny fitondrantenany no tena antony lehibe nahatonga an'io olana io, nanao izay azony natao ireo marary hafa hanampiana azy.
Ny blaogera vovan9619 no namoaka voalohany ny tantara. Toy izao no nalefany:
Mirary andro finaritra ho an'ny rehetra. Te-hizara fotsiny ny vaovao mikasika ny toeranm-pandraisanay ORT sy ireo marary aho. Misy zazalahy atao hoe Lesha eto an-tanànanay, miara-manatrika ny fandaharana izy sy ny vadiny. Manan-janaka vavikely izy ireo … Maka fanafody izy efa ho herintaona izao, ary ny vadiny vao fotoana vitsy monja. Roa herinandro lasa izao, tsy nahatratra ireo ora fisokafan'ny toeram-pandraisana izy (noho ireo antony azy manokana ) ary niverina tao amin'ny an-toerana indray ora iray taorian'ny nikatonany. Mamo izy ka tsy azony an-tsaina hoe nahoana izy no tsy mahazo mihinana fanafody. Nandà tsy nety nanome azy an'io ny lehiben'ny mpitsabo mpanampy. Nony avy eo nokendainy itsy farany, tsy fantany intsony izay nataony… ny andro manaraka voaroaka tao anaty fandaharanasa izy ary nanao tatitra ilay mpitsabo mpanampy niampanga azy ho namono azy.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, nanomboka niahiahy momba ny amin'i Lesha sy ny vadiny ireo hafa marary ao amin'ny ORT ary nanapa-kevitra ny hitsidika azy. Hitan'izy ireo i Lesha tena efa marary mafy, mamo sy ao anatina soritr'aretina tena henjana. Nanapa-kevitra ny hanampy azy izy ireo. Nanoratra i Vovan9619 fa:
Dia niresaka taminy izahay ary nianiana izy fa hijanona tsy hisotro intsony ary hiala tsiny amin'ilay mpitsabo mpanampy. Koa satria izahay nanaiky nametraka ilay fangatahany tany amin'ilay dokotera lehibe, niangavy azy mba hanavao indray ho ao anaty fandaharanasa ORT – dia nanaiky ilay dokotera ny hanao an'io ka andro vitsivitsy dia tafaverina tao anaty fandaharanasa i Lesha. …Nampanantena i Lesha fa tsy ho avy intsony anaty hamamoana indray ho any amin'ireo olona izay nitovy taminy. Ary fantany fa mety ho sazin'ireo olona ireo izy ary tsy ho afaka handavo an'ireo olona ireo. Ary ny anatra amin'ity tantara ity dia – tsy afa-miaraka ny ORT sy ny alikaola (na ny labiera aza) !!!
Andro vitsivitsy taty aoriana nandefa ny ampahany faharoa tamn'io tantara io ireo blaogera ary tsy tantara tsara fiafaràna izany. Nandefa ny Vovan9619 fa:
Noho ireo ezaka nataon'ireo marary hafa sy ny toetra maha-olona nasehon'ny lehiben'ny mpitsabo, N. S. Orishchak, nohavaozina ho ao anaty fandaharanasa ORT indray ilay mararin'ny ORT ‘Lesha Vashchenkov’. Saingy niha-nmarefo ny fahasalamany ka ny andro voalohany, zara raha afaka namindra izy ary ny andro faharoa, nentin-dreniny tany amin'ny toeram-pitsaboana izy. Nirediredy izy ary azo lazaina fa tao anatin'ny aretina mafy. Tsikaritr'ireo mpitsabo tao amin'ny toeram-pitsaboanay izany ka nalefany tany amin'ny… rihana faharoa izy (hopitaly misahana ny mpidoroka). Nozahan'ny mpitsabo tao izy ary… nolazainy fa mila fandidiana maika. 10 minitra monja izy dia efa tao anaty efitrano fandidiana (ny policlinic #1) izay eo amin'ny 50 metatra miala ny birao. Nalefan'ny mpandidy maika be tany amin'ny Hopitaly Foiben'ny Faritra ao Shostka i Lesha.
Saingy rehefa fantatr'ireo mpitsabo tao amin'ny hopitaly fa mpidoroka izy, nolavin-dry zareo ny hanao ilay fandidiana izay nohitrikitrihany teo aloha izy ireo!
Miha-marary hatrany i Lesha ary nanomboka nitomany ny reniny ary niangavy an'ireo dokotera mba hanampy azy, saingy noho ireo antony maromaro dia nanapa-kevitra izy ireo ny handefa azy any amin'ny departemanta fitsaboana izay toerana nahafatesany afaka ora roa.
Azon'ireo marary antoka fa ny tena antony lehibe nahatonga ny fahafatesan'ireo mitovy aminy dia ny fitsaràna ivelany ataon'ireo mpiasan'ny toeram-pitsaboana amin'ireo olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Namorona vondrona iray fandraisana fanapahan-kevitra izy ireo mba hisintonana ny sain'ny fiarahamonina hijery ny olan'izy ireo ary, araka izay nosoratan'izy ireo “mba hanakanana ilay mpitondra fahafatesana”.